प्रिय करुणाजी, म ५० वर्षको भएँ । मैले ४० वर्षको हुँदा २७ वर्षकी युवतीसँग विवाह गरेको थिएँ । विवाह गरेको केही समयपछि मैले थाहा पाएँ, जीवनमा जागिर, पैसा, प्रसिद्धि ठूलो कुरा होइन रहेछ । मुख्य कुरा त श्रीमतीसँग व्यवस्थित रुपमा जीवन चलाउनु नै रहेछ ।
अहिले उनको र मेरो दैनिक जीवनको रुची खासै मिल्दैन । उनी सौन्दर्य, सिनेमा र घुमघाममा रुचि राख्छिन् । उनी मलाई ‘बुढो भइसक्नु भयो’ भनेर गाली गर्छिन् । मचाहिँ ‘तिम्रो केटाकेटीपन कहिल्यै गएन’ भनेर रिसाउँछु ।
दुईको उद्देश्य नमिल्दा हाम्रो यौन सम्पर्क कम हुँदै गएको छ । यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने होला ?
जीवन विविधताले भरिएको छ । यही कारण उमेरअनुसार मानिसको रुचि फरक-फरक हुन्छ । सँगै बस्ने र सँगै जीवन जीउनेहरुको जति धेरै कुरा मिल्यो, जीवन त्यति नै रमाइलो र रुचिपूर्ण हुन्छ ।
अध्ययनहरुले देखाएअनुसार आदर्श सम्वन्धका लागि श्रीमान र श्रीमतीबीचको उमेर फरक सामान्यतयाः तीन/चार वर्षको मात्र हुनुपर्छ । उस्तै-उस्तै उमेरका श्रीमान-श्रीमती वा श्रीमानभन्दा श्रीमती केही कम उमेरको भए पनि सम्वन्धमा खास समस्या आउँदैन । यौन जीवन सन्तुष्टिले भरिएको हुन्छ ।
श्रीमती श्रीमानभन्दा केही बढी उमेरको भए पनि खासै फरक पर्दैन । उनीहरुले उमेरको विषयलाई ठूलो मुद्दा बनाउँदैनन् भने सम्बन्धमा ‘एज फयाक्टर’ले केही प्रभाव पार्दैन ।
श्रीमान र श्रीमतीबीचको उमेर १२ बर्षभन्दा माथिको छ भने उनीहरुका चाहना, प्राथमिकता, शारीरिक गतिविधिमा फरक पर्न जान्छ । ४५ बर्ष उमेरको श्रीमान गल्फ या टेनिस खेल्न मन पराउने खालको हुन्छ भने ३० बर्षभन्दा कम उमेरकी पत्नीको प्राथमिकता पौडी खेल्ने, नाच्ने, रात्रि क्लब या पार्टी कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुने हुन सक्छ ।
२७ बर्ष उमेरकी श्रीमतीलाई उनका उमेरजन्य गतिविधिको बिन्दास अनुभव गर्न रोक्दा अप्राकृतिक निषेध हुन जान्छ । उमेरजन्य स्वभावलाई रोक्नु मूलको पानी थुन्न खोज्नेजस्तै हो ।
अर्को कुरा, ४५ बर्ष उमेरको श्रीमानलाई ३० बर्ष मुनिका गतिविधिहरुमा तानेर ल्याउँदा दिक्क लाग्न सक्छ । किनभने उसले धेरै वर्षअघि ती गतिविधि गरेर वाक्क भैसकेको हुन्छ । त्यसमा उसको रस बाँकी रहँदैन । त्यही कुरा दोहोर्‍याउँदा दिक्दारी हुनु स्वाभाविकै हो । त्योबेला उमेर र शरीरका प्राथमिकता र चाहना अर्कै खालका हुन्छन् । बढी उमेरको श्रीमान कम उमेरकी श्रीमतीका लागि साथीभन्दा पनि अभिभावकजस्ता हुन्छन् । यसैलाई उनले सकारात्मकरुपमा लिने हो भने श्रीमानबाट अभिभावकले जस्तै बढी केयरिङ पनि पाउन सक्छिन् ।
श्रीमानले श्रीमतीको उमेरजन्य चञ्चले व्यवहारलाई सहजरुपमा बुझ्नुपर्छ । त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ । उनका चाहना अनुरुपको व्यवहार गर्नुपर्छ । यही नै समाधानको उपाय हुन सक्छ ।
तपाइ लाखौं रुपैयाँको सोच बनाइरहनुभएको हुन सक्छ । तर, श्रीमतीलाई २ सय रुपैयाँको टिकट लिएर फिल्म देखाउँन लैजाँदा त्योभन्दा बढी सन्तुष्टि प्राप्त हुन सक्छ भन्ने कुरा भुलिरहनुभएको हुनसक्छ । यस्ता झिना मसिना कुराहरुमा पनि जीवनको अपार आनन्द लुकेको हुन्छ । नियालेर हेर्नुस् ।
परिपक्व श्रीमानबाट प्राप्त हुने अभिभावकत्व तथा अनुभवको लाभ श्रीमतीले लिन सक्नुपर्छ । श्रीमानले पनि श्रीमतीको जागिरप्रतिको चाहना के छ र के कस्तो जागिरमा रुची छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । त्यसैअनुरुप काम गर्ने अवसर दिलाउनुपर्छ । यसले दुबैजनालाई नजिक ल्याउन मद्दत पुग्छ ।
यी चाहनापछि मात्र यौनको प्रसँग आउँछ । आपसी सम्बन्धका व्यवहारिक पक्षमा सहजता आएपछि यौन जीवनबारे छलफल गर्नुपर्छ । श्रीमतीको यौन चाहना र सन्तुष्टिको बारेमा बुझ्नुपर्छ । यौनमा रोमाञ्चकता भए नभएको बुझेर त्यसै अनुसार सम्पर्कलाई परिस्कृत गर्दैर्जानु पर्छ । अनि बल्ल उमेरको फरकबीच पनि सन्तुष्टिका नयाँ ढोका खुल्न सक्नेछन् ।
नयाँ कुरा जान्न खोज्ने, उर्जाशील भैरहने तपाईको सोच छैन भने विश्वास गर्नुहोस् तपाई बूढो हुनुभयो । सोच र चिन्तनका कारण मानिसलाई बूढो र युवा भनेर परिभाषित गर्न सकिन्छ
दुबैका चाहना र आकांक्षालाई सम्मान गर्नसक्ने हो भने परिवारमा एउटा रमाइलो वातावरण निर्माण हुनसक्छ । दुबैजना अलग-अलग दिशातिर फर्किने हो भने त उपलब्ध सम्भावना पनि गुम्न सक्छन् । त्यसैले उमेरको ठूलो फरकबीचका सम्भावना खोज्नेतिर लाग्नु नै बेस हुन्छ ।
बूढो महसूस हुनु मानिसको चिन्तन र सोचसँग सम्वन्धित बिषय हो । मानिसको सोच, संस्कार, चिन्तन र कार्यशैली युवास्तरका छन् भने तपाईका हरेक गतिविधिका नतिजा पनि उर्जाशील हुन्छन् । तपाई कुनै जमानामा अध्ययनशील हुनुहन्थ्यो र परीक्षामा राम्रो नतिजा ल्याउनुहुन्थ्यो, तपाईले आफूलाई क्षमतावान दाबी गर्न आज पनि त्यही स्तरको मेहनत आवश्यक छ ।
नयाँ कुरा जान्न खोज्ने, उर्जाशील भैरहने तपाईको सोच छैन भने विश्वास गर्नुहोस् तपाई बूढो हुनुभयो । सोच र चिन्तनका कारण मानिसलाई बूढो र युवा भनेर परिभाषित गर्न सकिन्छ ।
युवा भएर पनि उ निष्कृय छ, जोश जाँगर छैन, नयाँ कुरा जान्न खोज्दैन भने २० बर्षे मानिस पनि बृद्ध हुन्छ । फूर्तिलो, जोशिलो, शारीरिक अभ्यास गरी तन्दुरुस्त भैरहने र ज्ञानका दृष्टिले आफूलाई अद्यावधिक राखिरहने मानिस सधैं युवा भैरहन्छन् । त्यस्ता व्यक्तिलाई उमेरले खास फरक पार्दैन ।
झापामा श्रीमतीले रक्सी खाएर श्रीमानलाईनै कुटिन, श्रीमानले सौता ल्याइदिए,पर्यो लफडा(भिडियो सहित)
श्रीमतीले रक्सि धेरै खाएर अत्तिचार गरेपछि श्रीमानले सौता हाल्दिए, पर्यो डरलाग्दो लफडा, अब के होला ? (भिडियो सहित)
श्रीमतीले धेरै रक्सि खाएर श्रीमानलाइ कुट्न तम्सिएपछि पर्यो लफडा, छोरा हेर्नलाइ श्रीमानले ल्याईदिए सौता (भिडियो सहित)
श्रीमतीले रक्सि धेरै खाएर अत्तिचार गरेपछि श्रीमानले सौता हाल्दिए, गाउँमा पर्यो डरलाग्दो लफडा, अब के होला ? (भिडियो सहित)